Irbada Insuliintu Ma jabinayso Soonka – Fatwa Somali
/Fiqh /Fiqh / Soonka / Irbada Insuliintu Ma jabinayso Soonka
Irbadaha Lugu Mudo Ama Lagu Duro Qofka Bukaa Waa Laba Nooc:
Kow: Irbado jidhka siinaya nafaqo oo lagaga kaaftoomayo cuntadii iyo cabitaankii, irbadaha noocani wey jabinayaan soonka sida saxa ah. Inkastoo ay jiraan culimo qabta in aanu soonku ku jabayn. Laakiin sida saxi waa in soonku ku jabayo haddii la qaato iyadoo la sooman yahay, waayo qofkii wuu kaga kaaftoomayaa cuntada iyo cabitaanka sida irbadaha guluugoosta. Ra’yigan odhanaya soonku wuu ku jabayaa irbadaha jidhka nafaqeeya waxa qaba culimo ay ka mid yihiin Ibnu Baaz, Ibnu Cusaymiin, Cadiya Saqar oo ahaan jiray madaxa gudida fatwada Azharka iyo Ibnu Jibriin.
Laba: Irbado aan jidhka siinayn nafaqo, oon lagaga maarmayn (lagaga kaaftoomayn) cuntadii iyo cabitaankii. irbadaha noocani ma jabinayaan soonka waayo cunto iyo cabitaan midna maaha. Irbadaha noocana een soonka jabin waxa ka mida irbadaha dawada, talaalka “Vaccination” iyo insuliinta.
Insuliintu waa dawada ay isku mudaan ama isku duraan dadka qaba xanuunka macaanka qaybta loo yaqaano (type 1), wayna banaan tahay in qofka soomani isku mudo dawadani haddii ay daruuro u geyso iyo haddii kaleba, waayo cunto iyo cabitaan midna maaha, qofkuna kagama kaaftoomayo cuntadii iyo cabitaankii, sidaa awgeed soonka ma jabinayso.
Gudida Joogtada ah ee Fatwada oo Sh.IBnu Baaz madax ka ahaa ayaa ku fatwootay inuu qofka jiran ee qaba cudurka macaanka ay u banaan tahay inuu isku mudo ama duro dawada insuliinta, inkastoo ay yidhaahdeen in habeenkii la qaato ayaa ka sii wanaagsan haddayna dhibi ku jirin. Su’aal la weydiiyey oo ah: (Walaalkay oo qaba cudurka macaanka ayaa u baahan inuu qaato irbada insuliinta maalin walba, irbadu ma jabinaysaa soonka, soonkuna ma ku waajibaa? Waxay ku jawaabeen:
(Dhibi kuma jirto in irbadan aad dawo ahaan u qaadatid dharaartii, qallena kuma saarna. Haddiise ay suurta gal tahay in la qaato habeenkii iyadoon dhibi kaa soo gaadhayna, sidaasaa haboon).